ओपन स्पेनडिंग कुन कुन प्रकारका अर्थिक तथ्यांक परछन् ?
ओपनस्पेन्डिङ्ग यो समर्थन गर्छ कि फाइनेन्सीयल तथ्याङ्कको प्रकारमा एकदम लचीलो छ । ओपनस्पेन्डिङ्ग परियोजना सरकारो वित्तमा एकदम ध्यान केन्दित रहेको छ, यो एउटा विधिबाधाहरु हैन । ओपनस्पेन्डिङ्ग एउटा लेनदेनको सेट, पैसाको एक मात्रा को साथ जोडेको प्रत्येक र एक समयमा कुनै पनि डाटासेटको समर्थन गर्छ ।
वर्तमानमा ओपनस्पेन्डिङ्ग मा हेस्ट डाटाको अधिकांश व्यवहार या बजेटीय डाटाको रुपमा वर्गीकृत गर्न सक्छौ । यो दुई को बीच मुख्य अंतर यो हो कि विघटनको आफनो स्तर छ । व्यवहार डाटा बजेटीय डाटा लेनदेन जबपक श्रेणीमा, व्यक्तिगत लेनदेन मार्ग .
####करोबार स्पेनडिंगमा तथ्यांक व्यवहार डाटा, या सरल, “डाटा खर्च” व्यक्तिगत वित्तिय लेनदेन मार्ग । एउटा निश्चित तिथिमा र एक विशिष्ट प्रयोजन (एक परियोजना या सेवा उदाहरण को लागि) को लागि एउटा इकाईबाट दोश्रोमा प्रत्येक भुगतान छुटै सुचीमा छ । लेनदेन सम्बन्धी खर्च डाटा सरकारी अनुदान, प्रतिबद्धता, र वास्तविकव्ययको बारेमा जानकारी सहित अभिलेखको विभिन्न प्रकार, सामेल छ ।
सकल जानकारी (जस्तोः सबटोतल) व्यवहार डाटामा सामेल हुनु हुदैन । आंशिक रुपमा या पूरा तरीका ले विश्लेषणको एक अलग विद्याको लागि कल एकत्रित गरिएको छ कि डाटा बजेटीय डाटाको सत्ता व्यवहार डाटाको रुपमा व्यवहार गर्न सकियोस् । यो मतलब हैन की, तथापि, एउटा पनि “तर्कसंगत” लेन–देन को लागि राशि जो कि धेरै “भौतिक” भुगतान व्यवहार डाटामा एउटा एकलाबाट प्रतिनिधित्व गर्न सकिदैन ।
ओपनस्पेन्डिङ्गमा व्यवहार डाटा सामिल छः
डी.सी. बिक्रेता र क्रेता
औस्त्रिअन बिकास संस्था
सरकारी खरिद प्रकियाको साथमा डाटा व्यापार को एक अन्य सम्बन्धि प्रकार । सार्वजनिक खरिद डाटा सार्वजनिक टेन्डर को बारेमा डाटा छ । प्रस्तुत गरिएको थियो कि, टेन्डर जित्यो कति, अरु जो को लागि । यो व्यवहार डाटा को एउटा सबसेटको रुपमा देख्न सक्छौ ।
ओपनस्पेन्डिङ्ग मा खरिद डाटा सामिल छः
मार्चएस पब्लिकस औ सेनेगल
मार्चएस पब्लिकस फ्रान्स २०११
####आय ब्यय विवरण तथ्यांक बजेटको डाटामा, व्यय र आय श्रेणीमा एकत्रित गरेर राखेको छ । यस एकत्रितकरणको लक्ष्य आमतरिकामा सरकारको सबभन्दा महत्वपूर्ण वित्तीय विकल्पको एक सिंहावलोकनको साथ पाठलाई प्रदान गरिएको छ कि एउटा नीति दस्तावेज हो जो बजेटलाई सम्झनेमा पाठकलाई सहायताको लागि हो । दरबन्दी आमतरिकामा एउटा बर्गीकरण योजनाको बजाय धनको वास्तविक प्राप्तकर्ता द्धारा संरचित छ ।
बजेटीय डाटा धेरैजसो संयुक्त रुपमा एक भविष्यको अवधिको लागि पछिल्लो परिणाम र विनायोजनमा डाटा प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो प्रकारको एक प्रस्तुतिमा, एक विशेष क्षेत्रमा पछिल्लो वर्षमा खर्च मात्रामा आइरहेको बजेटको अवधिको लागि बाँडफाँड गर्न पर्छ कति सूचना गर्नको लागि उपयोग गर्न पर्छ । बजेट जानकारी धेरैजसो एकत्रित डाटा र सांख्यिकीय अनुमानमा आधारित छ ।
कार्यकारी बजेट प्रस्ताव, अधिनियमित बजेट, र नागरिक बजेट (नागरिकहरुको लाभको लागि बजेटको सरल संस्करण) को पूर्व बजेट विवरणः विभिन्न क्षेत्र सहित उपलब्ध बजेटीय जानकारी, को विभिन्न प्रकार छ ।
ओपेन स्पेन्दिङमा पर्ने आर्थिक तथ्याङ्क:
सेविल्ले स्पेनडिंग बजेट
अर्को: [ओपेन स्पेनडिंगले तथ्यांक कसरी प्रस्तुत गर्छ ?]